Maaltu deemaa jira, Oduu gara garaa, Amajjii 13, 2018 -
Akkuma beektu ani hojjetaa bankii saamame kan Caanqaati. Amma Asoosaattan baqadhee jira. Soba mootummaan oofu argeen aaree si barresse. Dhugaan jirtu WBOn baankii keenya utuu saamuu barbaadee dur saama ture. Yeroo baayyee dhufanii nu dubbisaniiru. Sodaa tokko malee akka hojii keenya hojjennu eegumsa amma dandaan akka nuu kennanille nutti himaniiru. Nagaadota maallaqa baafatanii gara bakka biraa deemaniifillee wardiyyaa ta’aa turani. Amma waan ta’e akkasi. Dura ajajtoonni waraanaa lama Waardiya wajjiin dhufanii maallaqa jiru hunda kaazna hunda keessa nu argisiisa jedhani. Manager hin turre itti aanaansaa isin eenyu maaliif jedhee jennaan biiroo keessaa baasanii qofaatti kaa’anii maallaqa hunda kaznaa keessaa baasanii lafa tuulanii namni tokko akka hin xuqne isinis akka hin sochoone nuun jedhanii ba’ani. Daqqiqaa murtaa’ee booda namooti ufata WBO fakkaatu uffatani shan seenanii Homaa tokkollee utuu hin jedhiin maallaqa jooniyaatti naquu jalqabnaan gurbaan itti aanaan maaltu ta’aa jira isin eenyu jedhee iyye. Isatti galagalanii callisi jedhanii inni tokko harka hidhee gadi base. Warri hafne bilbila poolisatti bilbiluu kan yaale ture garuu hin hojjetu jedhani. Jarri akkasitti maallaqa hunda fudhatanii ba’ani. Hundi keenya gognee hafne daqiiqaa murtaa’e booda poolisoonni dhufanii. Waan nama dhibu unu keessa waan kana kan qindeessa turan jiru. Isaanis gahee isaanii fudhataniiru. Polisootattis wbotu nu same jedhanii himani. Polisoonni garuu ni kolfu turan. Ani sana booda mootummaan akka hin jirren bare. Makiinaa fe’umsaa tokko kan hiriyyaako qabadheen asoosaa seene. Dubbiin akkasii. Fulduratti ballinaan sii barreessa.”
Kr. Amansiis Qanaatee
“Godina Gujii lixaa Abbootii qabeenyaa fi namoota bebekamoo 200 oli mana hidhaa jiru. Guyyaa afuraffaa isaaniiti. Maatiin gaafachuu hin danda’an. Darara cimaadha. Mootummaa Dr. Abiyi nama qulqulluu ajjeesa, abiddaan reeffa namaa gubsiisa. Ammaan kana konkolaachisaa Ambulaansii Hospitaala Qarcaa rasaasan dhahanii konkolaachisaa ajjeesan. Hanga ammaa namoota ardha qofa nama 9 du’e.(2 fincaawa, 6 qarcaa, 2 garbaa fi 1 konkolaachisa)…”
← Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Amajjii 13, 2019 →